भारतमा २४ घन्टामै थपिए २ हजार कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिए, नेपालमा पनि बढ्यो खतरा ! – Online Nepal
भारतमा २४ घन्टामै थपिए २ हजार कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिए, नेपालमा पनि बढ्यो खतरा !
May 1, 2020 312
भारतमा कोविड–१९’ संक्रमितको संख्या ३५ हजार ४३ पुगेको शुक्रबार जनाइएको छ । योसँगै भारतमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान जानेको संख्या १ हजार १४७ पुगेको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ । गएको २४ घन्टायता भारतमा एक हजार ९९३ कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित थपिएका छन । उक्त मन्त्रालयका अनुसार भारतभर गएको २४ घन्टायता निधन हुनेको संख्या ७३ जना रहेको छ । भारतमा देखिएका यी संंक्रमितहरूमध्ये ८ हजार ८८८ जना भने उपचारपछि निको भएर फर्किएका छन् । मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार हाल यहाँ २५ हजार ७ कोरोनाका संक्रमित विरामी अस्पतालमा उपचाररत रहेका छन् ।
शुरुदेखि नै भारतको महाराष्ट्र कोरोना भाइरसबाट अत्यन्त प्रभावित राज्यको रूपमा रहेको यहाँँको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ । शुक्रबार पनि यो क्रम जारी नै रहेको उक्त महाराष्ट्र राज्यमा मात्र संक्रमितहरूको संख्या १० हजार ४९८ जना पुगेको उक्त मन्त्रालय बताएको छ । महाराष्ट्रमा कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण ४५९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
महाराष्ट्रपछि गुजरात यस भाइरसको संक्रमण दोस्रो स्थानमा रहेको र यहाँ ४ हजार ३९५ संक्रमित रहेका छन् । यस राज्यमा ६१३ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् । गुजरातमा यस भाइरसको सक्रमणको कारण २१४ जनाको ज्यान गएको छ ।
गुजरातपछि यस भाइरसको संक्रमण तेस्रो स्थानमा दिल्ली रहेको र यहाँ ३ हजार ५१५ संक्रमित रहेका छन् । यस राज्यमा १ हजार ९४ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् । दिल्लीमा यस भाइरसको सक्रमणको कारण ५९ जनाको ज्यान गएको छ । भारतमा कोरोनाको खतरा बढेसंग नेपालमा पनि अहिले कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएको छ ।
नेपालमा थप २ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। नेपालगञ्ज र रुपन्देहीमा १/१ जनामा कोरोना देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीका अनुसार रुपन्देही निवासी २५ वर्षका पुरुष र नेपालगञ्जका ६० वर्षीय पुरुषमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो। उनीहरु स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा छन्। नयाँ भेटिएका दुबै संक्रमित पुरूष हुन्।
उनीहरुमध्ये एकजनाको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणबाट कोरोना पुष्टि भएको हो। अर्काको नेपालगञ्‍जस्थित ल्याबमै गरिएको पिसिआर परीक्षणमा कोरोना देखिएको हो। उनीहरु दुईमध्ये एकजना विदेशबाट आएको खुलेको छ। अर्का बिरामी रुपन्देहीका बासिन्दा हुन्। तर उनलाई नेपालगञ्‍जकै आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको थियो। मन्त्रालयले यसबारेमा केही समयमा आधिकारिक जानकारी दिने भएको छ।
Prevकोरोनाको उत्पत्ति भएको चीनमा आजदेखि स्कुल खुला, भाइरस सर्न नदिन यसरी विद्यार्थीलाई सुरक्षा कवच लगाइयो
Nextपूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको आज ५०औँ एनिभर्सरी
बिहार बन्यो छिनभरमै पानीको ताल – नेपालले बाँध पुनःनिर्माण गर्ने नदिने! (हेर्नुहोस भिडियो)
यी हुन् कोरोना भाइरसका संक्रमित नभेटिएका देश (सूचीसहित)
होचो भएर चिन्तामा हुनुहुन्छ ? अप्नाउनुहोस् मात्र यी ५ उपाय